သတိထားဆက်ဆံရမယ့် သင့်နားက လူ (၈) မျိုး – Tameelay
သူတို့အတွက် တင်စီးတာဟာ ယုံကြည်မှုရှိတာပါ။
မာန ဟာ ဘဝနေထိုင်နည်းပါ။ ဘေးနားကလူတွေထက် အမြဲသာကြောင်းပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေပါ။
ဒီ လူ တွေကို လိုတာထက်ပိုပြီး မပတ်သက်ပါနဲ့။
သင်အောင်မြင်တာကို မကျေနပ်တာမျိုးတင် မဟုတ်ပါဘူး။
သင်အခက်အခဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာကို ပျော်နေတာပါ။ ဒီ လူ တွေရဲ့ အကျင့်ကိုက အဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပါ။
၃ ဟန် သမား
ဒီ လူ တွေကတော့ အေးအေးဆေးဆေး သမားတွေပါ။
ဖော်ရွေပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးအတိုင်းပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သင် ဒုက္ခ ရောက်ပြီ၊ အကူအညီလိုပြီဆိုတာနဲ့ သင့်အနားက ပျောက်သွားပါပြီ၊ မရှိတော့ပါဘူး။
မကောင်းတဲ့ယခင်က အလေ့အကျင့်ဟောင်းတွေဆီ သင့်ကို ပြန်ဆွဲချသွားမယ့်လူတွေပါ။
ဘယ်အရာကမှ သူတို့အတွက် မကောင်းပါဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် သူတို့အတွက် ကျေနပ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လိုပုံစံ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုဖြစ်ဖြစ် သူတို့က မကောင်းတဲ့ဘက်က မှတ်ချက်တွေပေးပြီး ဝေဖန်ပါတယ်။
သင့်ကို သူတို့အကြိုက် ထိန်းချုပ်မယ့်လူ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကိုလွှမ်းမိုးပြီး သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၇ အတင်း ပြောသူများ
ဒီလို လူ မျိုးတွေနဲ့ သူများအကြောင်း သွားမပြောပါနဲ့။ သင့်ကွယ်ရာမှာလည်း သူတို့က သင့်အကြောင်းပြောမှာပါ။ သူတို့လာပြောလည်း အလိုက်သင့်ပြန်ပြောပြီး ဘာမှပြန်မပြောတာ အကောင်းဆုံးပါ။
၈ တရားခံ ရှာသူများ
တစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်း အနီးကလူကို လက်ညှိုးထိုးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါရပ် တစ်ခုခုနဲ့
ငြိစွန်းနေတဲ့ သူမျိုးဆိုရင် သင်သတိထား
သတိထားဆကျဆံရမယျ့ သငျ့နားက လူ (၈) မြိုး
သူတို့အတှကျ တငျစီးတာဟာ ယုံကွညျမှုရှိတာပါ။
မာန ဟာ ဘဝနထေိုငျနညျးပါ။ ဘေးနားကလူတှထေကျ အမွဲသာကွောငျးပွဖို့ ကွိုးစားနသေူတှပေါ။
ဒီ လူ တှကေို လိုတာထကျပိုပွီး မပတျသကျပါနဲ့။
သငျအောငျမွငျတာကို မကနြေပျတာမြိုးတငျ မဟုတျပါဘူး။
သငျအခကျအခဲဒုက်ခတှဖွေဈနတောကို ပြျောနတောပါ။ ဒီ လူ တှရေဲ့ အကငျြ့ကိုက အဲ့အတိုငျးဖွဈနတောပါ။
၃ ဟနျ သမား
ဒီ လူ တှကေတော့ အေးအေးဆေးဆေး သမားတှပေါ။
ဖျောရှပေါတယျ။ သူငယျခငျြး အရငျးကွီးအတိုငျးပါပဲ။
ဒါပမေဲ့ သငျ ဒုက်ခ ရောကျပွီ၊ အကူအညီလိုပွီဆိုတာနဲ့ သငျ့အနားက ပြောကျသှားပါပွီ၊ မရှိတော့ပါဘူး။
မကောငျးတဲ့ယခငျက အလအေ့ကငျြ့ဟောငျးတှဆေီ သငျ့ကို ပွနျဆှဲခသြှားမယျ့လူတှပေါ။
ဘယျအရာကမှ သူတို့အတှကျ မကောငျးပါဘူး။
ဘယျလောကျပဲလုပျလုပျ သူတို့အတှကျ ကနြေပျစရာမဟုတျပါဘူး။
ဘယျလိုပုံစံ ဘယျလိုလူမြိုးကိုဖွဈဖွဈ သူတို့က မကောငျးတဲ့ဘကျက မှတျခကျြတှပေေးပွီး ဝဖေနျပါတယျ။
သငျ့ကို သူတို့အကွိုကျ ထိနျးခြုပျမယျ့လူ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ကိုလှမျးမိုးပွီး သူတို့လိုအပျခကျြတှကေိုပဲ ဦးစားပေးလုပျပါလိမျ့မယျ။
၇ အတငျး ပွောသူမြား
ဒီလို လူ မြိုးတှနေဲ့ သူမြားအကွောငျး သှားမပွောပါနဲ့။ သငျ့ကှယျရာမှာလညျး သူတို့က သငျ့အကွောငျးပွောမှာပါ။ သူတို့လာပွောလညျး အလိုကျသငျ့ပွနျပွောပွီး ဘာမှပွနျမပွောတာ အကောငျးဆုံးပါ။
၈ တရားခံ ရှာသူမြား
တဈခုခုဖွဈရငျလညျး အနီးကလူကို လကျညှိုးထိုးတတျပါတယျ။အဲ့ဒီအင်ျဂါရပျ တဈခုခုနဲ့
ငွိစှနျးနတေဲ့ သူမြိုးဆိုရငျ သငျသတိထား
အောင်မြင်တိုးတက်လိုသော လူငယ်တိုင်းအတွက် အကြောင်းအရာ (၁၂) ချက်
၁။ ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းဟာ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ချောဆီပါ။ သုတေသနအရ လူတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတဲ့လူကို ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းအုန်းတော့အချက်ကျကျ လောင်းတတ်ရင် အကျိုးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရက်ရက်ရောရောချီးမွမ်းတတ်ပါ။ မည်သည့်အခါမျှ အကျိုးမယုတ်ပါ။ ၂။ စိတ်ညစ်လာရင် ခဏရပ်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ စိတ်တအားညစ်လာရင် လက်ထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောနေရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ခဏရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငြိမ်သက်တဲ့အချိန် …
အောင်မြင်တဲ့သူတွေ အိပ်ရာမဝင်ခင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသော အလေ့အထများ
သင်ကော အိပ်ရာမဝင်ခင် ဘာတွေလုပ်လေ့ရှိလဲ?မအိပ်ခင် ရုပ်ရှင်ကြည့်သလား? Facebook ကိုကြည့်သလား? သင့်မိသားစုနဲ့ တူတူရှိနေသလား? အောင်မြင်တဲ့သူတွေကရော ဘာလုပ်လေ့ရှိသလဲ? ကြည့်ရအောင် 1။တနေ့ တာကို ပေါင်းချုပ်တယ် သင်ကတကယ်လို့ ညနေ၆နာရီထိ အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုရင် ၆နာရီမှာသင့်အလုပ်တွေ ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ဒါမှသာ သင်ဟာ အခြားအရာတွေအပေါမှာ အာရုံစိုက်နိုင်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာတိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကို အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။သင်တနေ့ တာအတွက် …
အရည်​အချင်းရှိတဲ့သူ ၁။ အရည်​အချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာ သူများလက်​​အောက်​မှာ အကြာကြီးမ​နေဘူး ၂။ အရည်​အချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာ သူများလက်​​အောက်​မှာ​နေရ​သော်​ငြား သူ့မှာကိုယ်​ပိုင်​ဆန္ဒ​တွေ စိတ်​ကူးစိတ်​သန်း​တွေ သူလုပ်​ချင်​တာ​တွေ အမြဲရှိ​နေတတ်​တယ်​ ၃။ အရည်​အချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာ သူများအမိန့်​နဲ့ သူများလက်​​အောက်​မှာ​နေရလင့်​ကစား သူ့စိတ်​ကူးစိတ်​သန်း​တွေ အကြံအစည်​​တွေ စီမံကိန်း​တွေကို အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​နိုင်​ဖို့ မဖြစ်​ဖြစ်​​အောင်​ ကြိုးစားတတ်​တယ်​ ၄။ အရည်​အချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာ အဲဒီလို …